ITesaloniana 2: 1-20
ITesaloniana 1 ITesaloniana 2 ITesaloniana 3
Fa ny tenanareo ry rahalahy, dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo;
fa rehefa nampahorina sy nisetrasetraina tany Filipy izahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sahy tao amin'Andriamanitray izahay hiteny taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoherana.
Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay, ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay, dia araka izany koa ny itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona, fa amin'Andriamanitra, Izay mizaha toetra ny fonay.
ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana hahavaky tratra aza izahay, araka izay mah'Apostolin'i Kristy anay.
dia toy izany no nahazoto anay, noho ny fitiavanay anareo indrindra, hanome anareo, tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany, fa ny ainay koa aza, satria efa malalanay hianareo.
Fa tsaroanareo, ry rahalahy, ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay; fa niasa andro aman-alina, mba tsy hahavaky tratra na dia olona iray akory taminareo aza, no nitorianay ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo.
Hianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa fa masina sy marina ary tsy nanan-tsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino,
toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka ny namporisihanay sy nampiononanay anareo isam-batana sy nananaranay mafy anareo,
Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorinay hianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin'olona, fa araka izay marina, dia ny tenin'Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa.
Fa hianareo, ry rahalahy, dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay ao amin'i Kristy Jesosy; fa ny nanjo anareo noho ny nataon'ny iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjo ireo koa noho ny nataon'ny Jiosy taminy,
Fa inona moa no fanantenanay, na fifalianay, na satroboninahitra reharehanay? Moa tsy hianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny fihaviany va?
Fa hianareo no voninahitray sy fifalianay.